युगसम्बाद साप्ताहिक - डा. केसीको अनशनका उपलब्धि
Saturday, 10.19.2019, 12:20am (GMT+5.5) Home Contact
डा. केसीको अनशनका उपलब्धि
Tuesday, 07.19.2016, 10:32am (GMT+5.5)
काठमाडौं । नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई मर्यादित र जनमुखी बनाउने माग गर्दै केही वर्षयतादेखि लगातार आमरण अनशनमा बस्दैआउनुभएका त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा. गोविन्द केसीले गत आइतबारदेखि आठौंपटक अनशन थाल्नुभएको छ । यतिबेला उहाँको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्तत नाजुक बन्दैगएको छ । पटकपटक अनशन बसेर सरकारले सम्झौता गर्दैआएको छ । उहाँले राख्नुभएका माग धेरै पूरा भएका छैनन्, तर जति पूरा भए र कार्यान्वयनमा जान थालेका छन् ।
यतिबेला उहाँ सातौंपटकको अनशन तोड्दा भएको सहमति कार्यान्वयनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिं कार्कीलाई महाभियोग लगाउन माग राखेर अनशन सुरु गर्नुभएपछि यसले अनेक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । डा. केसीको अभियानमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरी समाचार विवरण सार्वजनिक भएका छन् । के डा. केसीको आन्दोलन निरर्थक र भ्रम मात्रै हो त ? पक्कै पनि हैन, उहाँले उठाउनुभएका सवालहरूको गहन विश्लेषण नै नगरी क्षणिक र व्यक्तिगत लाभका लागि बिरोध हुने गरेको छ ।
अहिले डा. केसीको आन्दोलनले विद्यार्थी विदेश पठाउनेलाई बल पु¥याएको भन्ने हल्ला चल्न थालेको छ । तर, यथार्थमा उहाँको अभियान नेपाल वा विदेश जहाँ भए पनि अयोग्यले पैसा तिरेकै भरमा डाक्टरी डिग्री पाउन नसकोस् भन्नका लागि हो र यसमा सरकारी पहल सुरु भैसकेको छ । जस्तासुकै विद्यार्थी विदेश गएर डाक्टर बनेर आउने काम यसै वर्षदेखि रोकिंदैछ । डा. केसीको अनशनको उद्देश्य जनताको स्वास्थ्य खतरामा नपरोस् भन्ने हो । अयोग्य विद्यार्थीहरूले डाक्टरी पढेका कारण नागरिकको पाइरहेको दुःख हामी सबैले देखेको, सुनेकै छौं । अहिले अख्तियारले नै नक्कली डाक्टरहरू पक्राउ गरिरहेको सन्दर्भमा उहाँको आन्दोलनको उपादेयता बढेको छ ।
त्यसै गरी उहाँका कारण नेपालको मेडिकल शिक्षा फष्टाउन सकेको छैन भन्ने आरोप पनि लागेको छ । तर यथार्थता के हो भने अभियान नभइदिएको भए अहिले कम्तिमा ३० निजी मेडिकल कलेजमा वार्षिक कम्तिमा ५ हजार कम गुणस्तरका चिकित्सक उत्पादन भइरहेका हुने थिए, तीमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा हुने थिए । तिनीहरूले कस्तो उपचार गर्थे ?
डा. केसीमाथि अर्को आरोप छ– उहाँका कारण स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन र उदार अर्थतन्त्रसँग उहाँका मागको तालमेल छैन । वास्तवमा उहाँको अभियानका कारण नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमाथि अस्तित्वकै संकट आउनबाट बचाएको छ र गुणस्तर कायम गरेर दिगो रुपमा फस्टाउने बाटो खोलिदिएको छ । महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने उदार अर्थतन्त्र भएका सबै विकसित देशमा स्वास्थ्य शिक्षा या त राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा छ, वा निजी क्षेत्रमाथि एकदमै चुस्त नियमन छ । उदार अर्थतन्त्र भनेको जसले जे गरे पनि हुने र लगानी गर्न सक्नेले खुलेआम विना पढाइ डाक्टरी डिग्री बेचे पनि केही नहुने भन्ने हैन ।
त्यसो त डा. केसी पटकपटक अनशन बस्ने र सहमति कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्ने गरिन्छ । यथार्थमा सहमतिहरू कार्यान्वयन भएका छन् । उदाहरणका लागि अभियान शुरु नभएको भए ३० औं मेडिकल कलेज खुलेर वार्षिक ५ हजार शंकास्पद गुणस्तरका चिकित्सकहरू बनिरहेका हुने थिए, तिनमाथि लगाम लगाउने हैसियत नियामक निकायहरूले गुमाइसकेका हुने थिए । करोडौं लगानी परेका कारण ती डाक्टरहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गएर सेवा दिन पनि असमर्थ हुने थिए र गुणस्तरमा भएको सम्झौताका कारण समाजमा यो पेशाप्रति अविश्वास अहिलेभन्दा पनि चुलिने थियो । यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न र अहिलेसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्न चिकित्सा शिक्षा नीति अहिले बन्ने क्रममा छ । गएको शैक्षिक सत्रदेखि मेडिकल कोर्सहरूका लागि सिट संख्या र शुल्कको सीमा र मेरिटमा भर्नाजस्ता कुराहरू आंशिक कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।